Wararka Maanta: Axad, Jan 3 , 2021-Ciidanka DANAB oo sheegay in ay burburiyeen xarumo ay lahaayeen Ururka Al-shabaab.
Saraakiisha ciidamada ayaa sheegay howlgalkan ay ku qabteen xubno ka tirsan Ururka Al-shabaab iyo agab ay lahaayeen sida mootooyin ay u isticmali jireen weerarrada iyo dilalka qorsheysan.
Ciidamada ayaa howlgalkan gaar ahaan ka fuliyay deegaanno ay ka mid yihiin Buur Heybe, Jiira Koolow, Durdurow, saax-weyn iyo Yaaq-doomaar, kuwaasoo hoos-taga degmada Buurhabaka.
Ciidanka Kumaandooska DANAB ayaa howlgallo ka fuliya deegaanada Al-Shabaab ku sugan yihiin, waxaana howlgalada qaar kala qeyb qaata Ciidamada Mareykanka ee tababarka siiya.
1/3/2021 1:01 AM EST
Axad, Janaayo, 03, 2021 (HOL) - Ra'iisal Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xusseen Rooble ayaa xalay dadkii ku dhaawacmay weerarkii ismiidaaminta ahaa lagu qaaday Injineerrada Turkiga ee dhismaha ka wadda wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye.